China Green PVC Coated Ukhuseleko Euro Farm Holland Wire Mesh Fence umzi-mveliso kunye nababoneleli |XINTELI
Material: HQ low carbon steel wire
Unyango lomphezulu: idiphu eshushu kunye negalvanized yombane, i-pvc yokwambathisa
Ukuvula: 60 * 60mm, 50 * 50mm, 50 * 100mm
Idayamitha yocingo: phambi kokuba i-pvc igqunywe yi-1.7mm, emva kokuba i-pvc igqunywe 2.2mm
Ububanzi: 60cm, 80cm, 100cm, 120cm njl.
Ubude: 10m, 25m, njl.
Ukuba ufuna iposi, nceda uqhagamshelane ngolwazi oluthe kratya.
Ucingo lwasegadini lubizwa ngokuba yi-pvc coating welded wire mesh okanye i-euro fence.I-Euro fence.
I-Garden-fencing isetyenziswa ngokubanzi njenge-guardrail, ngenxa yesakhiwo sayo silula, umgaqo woyilo lwesayensi, olufikelelekayo, olulula ukuyifaka kunye nezinye iingenelo, ngaloo ndlela ithandwa kakhulu ngumntu kwihlabathi lonke.
Umbala womphezulu ngokuqhelekileyo uluhlaza, ngokuhambelana nokusingqongileyo.Ngoko ke, nayiphi na eminye imibala ikwabonelelwe.
Umnatha waseDatshi unomsebenzi olungileyo wokulwa nokubola, umhle kwaye unesisa.Kulula kwaye ukhawuleza ukuyifaka.Inokusetyenziswa ngokubanzi kwishishini, ezolimo, kumasipala, kwezothutho kunye nocingo lwamashishini, umhlobiso, ukhuseleko kunye nezinye izibonelelo.Uneempawu ezilungileyo. ukuchaneka kokucoca, amandla omthwalo ophezulu, ixabiso eliphantsi kunye nokufakwa okulula.
Isetyenziselwa ikakhulu ifama, uhola wendlela kunye, uloliwe, ibhulorho kumacala omabini ebhanti yokhuselo; Ukhuseleko lokhuseleko lwezikhululo zeenqwelomoya, amazibuko kunye neendawo zokukhenkcela; kunye nokuhombisa iihotele, iihotele, iivenkile ezinkulu kunye neendawo zokuzonwabisa
Ngaphambili: Umzi-mveliso woBonelelo lweFama yokubiyela iinkomo Umnatha weHinge oDibeneyo Lokubiyela Umhlaba
Okulandelayo: Iipaneli zoNxibelelwano zoNxibelelwano eziXhelisiweyo zeSakhiwo seConcrete / Iphaneli yoMnatha eQisiweyo eWelded Wire Mesh
ucingo euro eluhlaza
Umnatha wocingo oludityanisiweyo kunye ne-pvc egqunywe